Sina 200 * 200mm Miforona mivantana amin'ny orinasa mpanamboatra kianja | TUBO
Manam-pahaizana momba ny milina fanaovana pipa
86-18034562377 (Fotoana miasa)
Miforona mivantana amin'ny kianja
120 * 120mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
150 * 150mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
200 * 200mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
250 * 250mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
300 * 300mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
400 * 400mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
500 * 500mm Miforona mivantana mankany amin'ny Kianja
Stainless Steel Sodina tsipika
FFX Mamorona Teknolojia
Shear sy Welder
Saw orbital Milling Saw
Points Blades Saw
Fitaovana famafazana zinc
Fampiarahana pneumatika an'ny balser pneumatic vy
Fitaovana bebe kokoa
Manapaka hatramin'ny tsipika lava
(0,5-4.0) mm × 1300mm Slitting Line
Ny famolavolana toradroa na mahitsizoro dia miforona alohan'ny fantsom-bozaka.
Afaka namboarina ihany koa izahay mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Coil Steel → Uncoiling → Flattening / Leveling → Shear & End Cutting → Coil Accumulator → Forming → Welding → Deburring → Water Coiling → Sizing → Straightening → Cutting → Run-out table
1. ampitahao amin'ny endrika boribory & toradroa miforona, io fomba io no tsara kokoa amin'ny endrika ampahan'ny hazo fijaliana, raha ampitahaina, kely ny savaivony antsasaky ny hazakazaka anatiny, ary fisaka ny molony, ny lafiny dia tsy miova, endrika tonga lafatra.
2. Ary ny enta-mavesatra rehetra dia ambany, indrindra ny fizarana habe.
3.Ny sakany amin'ny vy dia manodidina ny 2.4 ~ 3% kely kokoa noho ny boribory mankany amin'ny toradroa / mahitsizoro, afaka mamonjy ny vidin'ny akora.
4.It dia mandray ny làlana miondrika teboka marobe, manalavitra ny hery axial sy ny abrasion amin'ny sisiny, mampihena ny dingana miforona ary miantoka ny kalitao, mandritra izany dia mampihena ny fandaniam-poana herinaratra sy ny abrasion-roller.
5. Izy io dia mandray ny roller karazana mitambatra amin'ny ankamaroan'ny fijoroany, mahatsapa fa ny setan'ny roller iray dia afaka mamokatra ny haben'ny fantsona toradroa / mahitsizoro miaraka amin'ny famaritana samihafa, mampihena ny fivarotana roller, mampihena ny vidiny manodidina ny 80% amin'ny roller, haingàna ny anjaran'ny banky, fohy ny fotoana amin'ny famolavolana vokatra vaovao.
6.All ny roller dia zara iraisana, tsy mila manolo ny roulons rehefa manova ny haben'ny fantsona, manitsy ny toeran'ny roller amin'ny motera na PLC, ary mahatsapa ny fifehezana mandeha ho azy feno; mampihena be ny fotoana fanovana roller, mampihena ny hamafin'ny asa, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
Tube Tube 80 x 80 - 200 x 200 mm
Rongo mahitsizoro 100 x 160 - 250 x 150 mm
Hatevin'ny rindrina 2.0 mm - 8.0 mm
Halavan'ny Tube 6.0 m - 12.0 m
Haingam-pandeha Max. 40 m / min
Fomba fanamafisana Fanamafisana matetika matetika amin'ny fanjakana
Fomba famoronana Miforona mivantana amin'ireo fantsom-bozaka sy mahitsizoro
Lisitry ny modely
MODELY Square Sodina (mm) mahitsizoro Sodina (mm) hateviny (Mm) Speed (M / min)
LW800 80 × 80 ~ 200 × 200 60 × 100 ~ 150 × 250 2.0 ~ 8,0 10 ~ 40
LW1000 100 × 100 ~ 250 × 250 80 × 120 ~ 200 × 300 3.0 ~ 10,0 10 ~ 35
LW1200 100 × 100 ~ 300 × 300 100 × 120 ~ 200 × 400 4.0 ~ 12,0 10 ~ 35
LW1600 200 × 200 ~ 400 × 400 150 × 200 ~ 300 × 500 5.0 ~ 16,0 10 ~ 25
Previous: Mill Steel Tube
Manaraka: Mill Pipe Mill
1. F: mpanamboatra ve ianao?
A: Eny, mpanamboatra izahay. Maherin'ny 15 taona R&D sy traikefa amin'ny famokarana. Mampiasa fitaovana milina maherin'ny 130 izahay mba hiantohana ny vokatra tonga lafatra.
2. F: Inona ny fe-potoana ekenao ekena?
A: Malemy paika amin'ny fe-potoana fandoavam-bola izahay, azafady mifandraisa aminay raha mila antsipiriany.
3. F: Inona avy ireo fampahalalana ilainao hamatsiana teny nindramina?
A: 1. Ny tanjaky ny vokatra farany ambany,
2. Ny haben'ny fantsona rehetra ilaina (amin'ny mm),
3. Ny hatevin'ny rindrina (min-max)
4. F: Inona no tombony azonao?
A: 1. Teknolojia mizara fizarana mandroso (FFX, Direct Forming Square). Mamonjy vola be dia be.
2. Teknolojia fanovana haingana indrindra hampitomboana ny vokatra ary hampihena ny hamafin'ny asa.
3. Maherin'ny 15 taona R&D ary traikefa amin'ny famokarana.
4. fitaovam-piasan'ny milina miisa 130 hiantohana ny vokatra tonga lafatra.
5. Namboarina mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
5. F: Manana fanohanana aorian'ny varotra ve ianao?
A: Ie, manana izahay. Manana ekipa mpiorina matihanina 10 matihanina sy matihanina izahay.
6.Q: Ahoana ny serivisinao?
A: (1) Fiantohana iray taona.
(2) Manome kojakoja ho an'ny ora iainana amin'ny vidiny.
(3) Fanomezana fanohanana ara-teknika horonantsary, Fametrahana an-tsaha, fanendrena ary fanofanana, fanohanana an-tserasera, injeniera azo ampiasaina amin'ny milina fanompoana any ivelany.
(4) Manome serivisy ara-teknika ho an'ny fanavaozana ny toerana, fanavaozana.
Shina miakatra mivantana amin'ny kianja
Miforona mivantana amin'ny factory factory
Miforona mivantana amin'ny kianja amidy
123456546 Kitiho ny fidirana raha hikaroka na ny ESC hikatona